बढ्दाे बजारमा प्रवेश गर्दै नागरिक स्टक डिलर कम्पनी, शेयर बजार उकालो लाग्न सहयाेग पुग्ने अनुमान - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
बढ्दाे बजारमा प्रवेश गर्दै नागरिक स्टक डिलर कम्पनी, शेयर बजार उकालो लाग्न सहयाेग पुग्ने अनुमान
सफल न्युज द्वारा २०७७ कार्तिक २४ गते सोमबार १५:०२ मा प्रकाशित
स्टक डिलरको काम गर्नका लागि स्थापना भएको नागरिक स्टक डिलर कम्पनी तिहारलगतै शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको नागरिक स्टक डिलर कम्पनीले सम्पूर्ण पुर्वाधारहरु तयार गरिसकेकाले तिहारलगतै बजारमा प्रवेश गर्ने भएको हो।
नागरिक लगानी कोषको सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापना भएको नागरिक स्टक डिलर कम्पनीले नयाँ बानेश्वरको कृष्ण टावरमा कार्यालय खोलेर कर्मचारी नियुक्ति गरिसकेको छ। डेटा ब्याकअप र सफ्टवेयरलगायत सम्पूर्ण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले तिहारलगतै मार्केटमा प्रवेश गर्ने तयारीमा पुगेको नागरिक लगानी कोषका नायब कार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र कुमार कट्टेलले बताए। ‘तिहारलगतै मार्केटमा प्रवेश गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘धितोपत्र बोर्डले दिएको न्यूनतम पूर्वाधारको काम पूरा भएकाले छिट्टै नै स्वीकृति दिने आशा छ।’
नागरिक स्टक डिलरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नेपाल राष्ट बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक महेश्वरलाई प्रधान नियुक्त भइसकेका छन्। उनलाई नागरिक लगानी कोषले मंसिर १५ भित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम थाल्न अन्तिम डेडलाइन दिएको छ। ‘मसिंरको १५ भित्र सञ्चालनका लागि अन्तिम डेडलाईन दिइएको छ,’ कट्टेलले भने, ‘त्यो डेट कटने छैन।’
नागरिक डिलर सञ्चालनमा आएपनि शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ। बढ्दो बजारमा नागरिक स्टक डिलरले थप बजारमा लगानी गर्ने भएपछि बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको हो।
नागरिक लगानी कोषलाई मार्केट डिलरको काम गर्न दिँदा बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने र शेयर बजार बढ्न सक्ने शेयर विश्लेषकहरुको भनाइ छ। नेप्से अहिले बढेर १६५० अंकको नजिकमा पुगेको छ। नागरिक लगानी कोष शेयर बजारमा प्रवेश हुन लागेकोले बजार बढ्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिएको छ।
नागरिक लगानी कोष (सीआइटी) को सहायक कम्पनी स्टक डिलरले शेयरबजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने, बिक्री नभएको शेयर किन्ने जस्ता काम गर्नेछ। उक्त कम्पनी सञ्चालनमा आएसँगै शेयर बजारमा स्थायित्व आउने लगानीकर्ताको अपेक्षा गरेका छन्।
नागरिक लगानी कोष बाहेक सञ्चय कोषलगायत पनि स्टक डिलरको काम इच्छुक देखिएका छन्। तर, सञ्चय कोषले स्टक डिलरको काम गर्ने गरी सहायक कम्पनी स्थापना गर्न सकेको छैन।
नागरिक लगानी कोषले शेयर किनबेच गर्ने उद्देश्यले छुट्टै स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरेको हो। उक्त कम्पनीमा सिआईटीको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।
सिआईटीको सहायक कम्पनीका रूपमा स्थापना गरिएको उक्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र अधिकृत पूँजी १० अर्ब छ। त्यसमा सिआईटीले २ अर्ब ५५ करोड लगानी छ। उक्त कम्पनीमा नेपाल टेलिकमको ९ प्रतिशत र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ।
सिआईटीका अनुसार नेपाल टेलिकमले ४५ करोड र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ५० करोड शेयर लगानी गरेका छन्। बाँकी रहेको ३० प्रतिशत शेयर भने सर्वसाधारण अर्थात् आईपीओमार्फत जुटाइने सिआईटीको भनाइ छ। कम्पनीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर १ अर्ब ५५ करोड बराबरको आईपीओ जारी गर्ने भएको छ।